Pyjamas – အဆိုပါ Tailoress
Dogs ကိုကျူတိုရီရယ်အဘို့အ Bella ညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီပွ
ဒီဇင်ဘာ 31, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | ခွေး, Pyjamas, tutorials
ရှေ့အဖွင့်စရာမလိုဘဲ: ရှေ့အဖွင့်နှင့်အတူ: လှမ်း 1 လူအပေါင်းတို့သည်ပုံစံကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်. တစ်ဦး Hood နှင့် BUTTONSTAND သုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်. သင် BUTTONSTAND အသုံးမပြုနေတယ်ဆိုရင်, ပုံစံအပိုင်းအစအပေါ်ပြထားတဲ့အစိုင်အခဲလိုင်းမှဗဟိုရှေ့ဖြတ်. Skip this step if you plan to not use […]